Home TOROHEVITRA FOTOTRA EUROPEAN Andriy Yarmolenko Tantaran'ny Ankizy Miampy Untold Biography Facts
Nohavaozina farany teo Janoary 27, 2020
Ny LB dia manolotra ny tantara feno momba ny "football genius" izay fantatra amin'ny anaram-bosotra "The New Sheva". Ny Andriy Yarmolenko Tantara Ankizy Ankizy Miampy Untold Biography Facts dia mitondra anao ny tantara feno momba ny zava-nitranga miavaka hatramin'ny fahazazany hatramin'izao.
Andriy Yarmolenko Tantara momba ny fiainana- Ny famakafakana
Ny famakafakana dia ahitana ny fiainany voalohany sy ny fiaviany, ny fanabeazana sy ny fananganana asa, ny fiainam-piandohana, ny lalana mankany amin'ny tantara malaza, mitombo ny laza laza, ny fifandraisana, ny fiainam-pianakaviana, ny fiainam-pianakaviana, ny fomba fiaina sns
Eny, ny rehetra dia mahita an'i Yarmolenko ho mpilalao baolina manana maso hiondrana tanjona. Na dia izany aza, vitsy ihany no mihevitra ny firaketana an-dRaman'i Andriy Yarmolenko izay tena mahaliana. Izao raha tsy mila ado intsony, andao hanomboka.
Andriy Yarmolenko Tantara Firaisana Ankizy Miampy Untold Biography Facts - Fiainana tany am-piandohana sy fianakaviana
Andriy Yarmolenko dia teraka tamin'ny andro faha-23 tamin'ny Oktobra 1989 tamin'ny reniny, Valentyna Yarmolenko sy ny rainy, Mykola Yarmolenko ao amin'ny tanàna seranan'i Port Saint Petersburg. Izy no zaza voalohany amin'ny ankizy roa teraka ho an'ny mahafinaritra azy sambatra-tahaka sary an-tsaina eto ambany ny ray aman-dreny.
Dada sy maman'i Andriy Yarmolenko amin'ny endrika mitsiky kely. Ny trosa amin'ny IG
Ny ray aman-drenin'i Andriy Yarmolenko dia samy Okrainiana. Nanapa-kevitra ny hanana ny zanany tany an-tanànan'i Saint Petersburg, tanànan'ny tanàna, ry zareo. Ny mpikambana rehetra ao amin'ny fianakavian'i Andriy Yarmolenko dia avy amin'ny Kulykivka Raion, Chernihiv Oblast, Ukraine Avaratra. Andao holazainao aminao ny antony nifindran'ny ray aman-dreniny tany Rosia.
Taorian'ny fanambadian'ny ray aman-dreniny, ny renin'i Andriy dia nomena asa mahasoa tao an-tanànan'i Saint Petersburg, tanàna seranan'i Rosia. Nanapa-kevitra ny handao ny vadiny vao manambady any Ukraine izy mba hipetraka any Rosia. Fotoana fohy taorian'ny nahaterahan'i Andriy tany Rosia dia nifindra avy tany Ukraine ny dadany mba hiaraka amin'ny reniny.
Andriy Yarmolenko dia lehibe tao anatin'ny fianakavian'ny fianankinan'ny saranga antonony izay nahafahantsika nihevitra fa ny reniny no mpanafika fisaorana noho ny asany tany Rosia. Ianao amin'ny fotoana iray raha mbola zazalahy Yarmolenko dia mbola nanao fiovana teo amin'ny fonenany ny ray aman-dreniny. Noho ny antony tsy fantatra dia nifindra tany amin'ny tany nahaterahany ny fianakaviana- ny tanànan'i Chernihiv, North Ukiraine tamin'ny fotoana kely Andriy Yarmolenko dia zazalahy kely.
Andriy Yarmolenko Tantara Firaisana Ankizy Miampy Untold Biography Facts - Fanabeazana sy fanabeazana
Ny fampianarana baolina kitra dia nanomboka tao Chernihiv, ny tanàna any Ukraine izay nahalehibe Yarmolenko. Tamin'izany fotoana izany, ny tantaran'i Okrainiana sy AC Milan Andriy Shevchenko dia mpanao sary sokitra rehetra napetraky ny rehetra. Ho an'i Yarmolenko, dia ny fanarahana ny dian-tongotr'ilay sampiny izay tamin'izany dia nilalao sy nanamontsana firaketana tao amin'ny Dynamo Kyiv.
Andriy Yarmolenko Idolized Shevchenko nandritra ny fahazazany. Ny trosa Europa Free Radio
Raha mbola zaza kely dia Andriy Yarmolenko tsy liana tamin'ny fanangonana kilalao vaovao. Ny rehetra dia tadiaviny amin'ny baolina kitra iray. Hmitaky ny angano baolina kitra (Andriy) amin'ny maha anarany azy, dia ara-dalàna ny zazalahy kely rehetra ny mitia amin'ny lalao mahafinaritra.
Toy ny tamin'ny fotoana nanoratana, ny fitadidiana tsara indrindra tamin'ny fahazazan'i Yarmolenko dia tazonina ho toy ny tombokavatsa amin'ny tanany. Ity ambany ity ny sarin'i tattoo Andriy Yarmolenko izay mampiseho azy toy ny ankizilahy manana baolina fandaka baolina mijery sarety mitifitra.
Andriy Yarmolenko Fanabeazana sy fananganana karama. Ny trosa WTFoot
Yarmolenko dia karazana ankizy izay haka baolina baolina amin'ny toerana rehetra alehany. Ho an'ireo ray aman-dreniny, dia tsy isalasalana firy fa mizotra amin'ny lalana tokony haleha izy, araka ny hita eo amin'ny fitohizany hanenjehana ny marika. Rehefa niantso ny fitsarana baolina kitra voalohany izy, ny hafalian'ny ray aman-dreniny dia tsy nahalala firy.
Andriy Yarmolenko Tantara Firaisana Ankizy Miampy Untold Biography Facts - Ny fiainam-piarahamonina tany am-piandohana
Yunist Chernihiv fikambanana iray ao an-tanànany no nanaiky an'i Yarmolenko ho mpiorina ao amin'ny akademia izy taorian'ny fanandramana nahomby niaraka tamin'izy ireo tamin'ny taona 2002. Yarmolenko fatra-paniry fatra-pitady an'i Yarmolenko izay mazoto hahomby amin'ny alàlan'ny klioba tanora telo hafa; Desna Chernihiv, Lokomotyv ary Vidradnyi Kyiv eo anelanelan'ny taona 2002 ka 2004.
Tamin'ny taona 2004, nanapa-kevitra hiverina tany Chernihiv i Yarmolenko, ny klioba dia nanomboka ny asan'ny fahatanorana izy noho ny tsy fahaizany namita ny fitakiana ara-batana fampiofanana avy amin'ireo klioba teo aloha. Nijanona niaraka tamin'i Yunist Chernihiv nandritra ny vanim-potoana 2 fanampiny izay nahita azy nahazo diplaoma tamin'ny fianarana izy talohan'ny nifindrany tany amin'ny klioba hafa (Desna Chernihiv) hanomboka ny asany ambony.
Andriy Yarmolenko Tantara Firaisana Ankizy Miampy Untold Biography Facts - Road to Fame Story
Nandritra ny Desna Chernihiv, i Andriy tanora dia nanomboka nahita ny fahafahan'ny filalaovana baolina ao Eropa. Ho azy, tsy misy afa-tsy ny lalana iray- dia izany; manaraka ny làlan'ny sarin'ilay sampy- Andriy Shevchenko.
Noho ny fanantenana lehibe napetraka tamina fitsapana niarahana tamin'i Dynamo Kyiv, ny marary iray Yarmolenko dia nanapa-kevitra ny hampihemotra ny asany amin'ny fiarahana amin'ny ekipan'ny tanora tanora antsoina hoe Dynamo-2 Kyiv. Miaraka amin'ny tsindry tsy dia mihamainty dia miasa ao amin'ny ekipan'ny zokiolona izy.
Amin'ny 11 May 2008, dia tanteraka ny nofinofin'i Yarmolenko hoe hialana amin'ny ekipa zokiolona Dynamo. Na dia nampiasaina havia sy afovoany aza izy, dia nanatratra baolina 99, nandroso izy ary hita fa nomena anarana hoe «Andriy Shevchenko vaovao / New Sheva”Avy amin'ny mpanao gazety. Niakatra ny meteoric Andriy Yarmolenko nahita azy nahazo voninahitra maro ho an'ny fikambanana.
Andriy Yarmolenko Lalana ho Fame Story. Ny trosa FC Dynamo Kiev sy IG
Andriy Yarmolenko Tantara Firaisana Ankizy Miampy Untold Biography Facts - Mitsangàna amin'ny tantara
Tahaka ny tao amin'ny 2017 klioba eropeana maro dia nanomboka nanery ny lehilahy kintana noho ny toetrany tsara, voatifitra sy hafainganana. Borussia Dortmund dia nandresy teo amin'ny lisitry ny klioba ambony niangavy ny lohaliny noho ny sonia. Tsy nijanona tao amin'ny klioba i Yarmolenko raha mbola tonga ny tolotra manondraka vava izay tsy azony atao.
Manomeza haingana ao amin'ny 11 Jolay 2019, Yarmolenko dia mankafy ny baolina kitra ao amin'ny Westham FC izay namoronana fiaraha-miasa mahomby miaraka amin'ireo mpiara-miasa aminy indrindra fa i Mark Noble-mpitarika ara-panahy ao amin'ny klioba izay manome sakafo azy amin'ny alàlan'ny fiodihany ny zo hahazoana isa.
Andriy Yarmolenko dia mankalaza ny fandresen'i Westham miaraka amin'i Mark Nobile. Ny trosa TheFootballFaithful
Mety tsy ho nahatratra ny haavo avo napetraky ny angano Ukranian Andriy Shevchenko, fa i Yarmolenko kosa, tsy isalasalana fa ampahany lehibe amin'ny andalana famokarana tsy manam-petra mpilalao manafika tonga any Ukraine. Ny ambiny, araka ny filazany, ankehitriny dia tantara.
Andriy Yarmolenko Tantara Firaisana Ankizy Miampy Untold Biography Facts - Relationship Life
Rehefa nandeha ny teny; ao ambadika lehilahy mahomby, misy vehivavy. Amin'ity tranga ity, ao ambadiky ny mpilalao baolina mahomby rehetra, dia misy tokoa ny tovovavy iray mahafinaritra na Wag. Raha jerena ny fahombiazana, ny taona 2011, raha nandresy i Yarmolenko dia mpilalao baolina matanjaka indrindra an'ny ligy Okrainiana an'ny taona dia tsy hohadinoina mandrakizay.
Ity no taona nanambadian'i Yarmolenko tamin'ny sakaizany izay avy amin'ny anarany- Inna. Fantatrao ve?… Ny vadin'i Yarmolenko dia manam-pahaizana manokana amin'ny raharaham-bahiny ary koa talen'ny The American Charity Fund. Ity zava-misy ity dia manambara fa tsara sy mahay ny tenany.
Hihaona amin'ny vadin'i Andriy Yarmolenko- Inna Yarmolenko. Ny trosa amin'ny IG
Miaraka, samy manambady zazalahy roa matanjaka izay mivady miaraka amin'i Ivan sy Danylo, izy mivady. I Ivan izay lahimatoany dia teraka tamin'ny andro 22nd Mey Mey 2013. Ity ambany ity ny sarin'izy roa lahy satria mankafy ny fotoana misy azy ireo amin'ny zaridaina iray.
Andriy Yarmolenko dia manan-janaka roa lahy - Danylo (ankavia) ary Ivan (havanana)
Amin'ny maha ray aman-dreny azy, ananan'ny tenany Andri Andri Yarmolenko dia azy, adidy hametraka ny toeran'ny fototra ho an'ny mpandimby azy. Mety ho sarotra ho azy ny miatrika fisotroan-dronono rehefa tonga ny fotoana, noho izany ny filana hanohizan'ny fiainana ny nofiny amin'ny alàlan'ny iray amin'ny zanany lahy.
Andriy Yarmolenko mamolavola ny zanany lahy Ivan tamin'ny fanarahana ny varotra nataony
Andriy Yarmolenko Tantara Firaisana Ankizy Miampy Untold Biography Facts - Fiainana manokana
Ny hahafantarana an'i Andriy Yarmolenko ny fiainana manokana tsy ho eo amin'ny lalao dia hanampy anao hahazo sary feno momba ny toetrany.
Etsy an-dàlana, Yarmolenko dia tena sariaka, manimba, mavitrika ary afaka zatra mora amin'ny karazana angovo rehetra manodidina azy. Ireo mpankafy mahalala azy ivelan'ny baolina kitra dia tena hahafaly ny orinasany.
Fantatrao Andriy Yarmolenko Fiainana manokana ivelan'ny filalaovana lalao. Ny trosa amin'ny IG
Andriy Yarmolenko Tantara Firaisana Ankizy Miampy Untold Biography Facts - Fiainana ao amin'ny fianakaviana
Tany am-boalohany dia momba ny nifindra tany Rosia izy mba hitady fiainana tsara kokoa. Androany, Valentyna sy Mykola izay sary eto ambany dia nanao ny lalan-kalehany mankany amin'ny fahaleovan-tena amin'ny alàlan'ny zanany lahy.
Andriy Yarmolenko miaraka amin'ny mamany sy ny dadany. Ny trosa amin'ny IG
Raha ny dadan'i Andriy Yarmolenko an'i Mykola dia mitokana amin'ny haino aman-jery, tsy mitovy amin'ny vadiny sy ny zanany vavy. Ity ambany ity ny sarin'i Valentyna eo ambanin'ny lanitra mazava.
Andriy Yarmolenko Reny sy rahavavy. Credits: IG
Fotoam-pahaterahana dia fotoana falifaly ho an'ny fianakavian'i Yarmolenko. Ity ambany ity ny sarin'ny Mandroso Okrainiana miaraka amin'ny zandrin'ny zanany amin'ny tsingerintaona nahaterahany. Ny fanolorany tena hahazoana antoka fa ny zandriny iray ihany no mahazo aina dia mitovy amin'ny fanolorantena apetrany amin'ny sehatra ambony.
Andriy Yarmolenko Rahavavy. Ny trosa amin'ny IG
Andriy Yarmolenko Tantara Firaisana Ankizy Miampy Untold Biography Facts - Lifestyle
Raha mitsara avy amin'ny haino aman-jery sosialy azy dia toa Andriy Yarmolenko dia mpilalao baolina kitra hendry izay mamonjy vola mandritra ny orana. Tsy misy famantarana ny fandaniam-bola be sy ny fomba fiaina mamirapiratra araky ny hitan'ny gony sy trano be dia be.
Andriy Yarmolenko Lifestyle. Ny trosa amin'ny IG
Andriy Yarmolenko Tantara Firaisana Ankizy Miampy Untold Biography Facts - Untold Facts
Ny lolom-panafahana lava: Tamin'ny lalao tamin'ny 2015 tamin'ny Oktobra, i Andriy Yarmolenko dia nanao fanamby mampidi-doza izay saika nanapaka ny tongotry ny mpifanandrina Shakhtar Donetsk antsoina hoe Taras Stepanenko. Nihavana ny roa aorian'ny lalao ary nifanakalo akanjo lava, saingy rehefa avy eo dia natsipin'i Yarmolenko ny akanjon'i Stepanenko raha nisaotra an'ireo mpankafy an'i Dynamo. Indray, tamin'ny lalao iray hafa, Yarmolenko dia nandaka an'i Stepanenko taorian'ny nanoratan'ny mpilalao Shakhtar ny karatry ny tenany ary nankalaza fatratra teo anoloan'ireo mpankafy Dynamo nandritra ny nandresen'i 3-0 azy.
Ny fifandonan'izy ireo dia nitarika ny fifanjevoana teo amin'ireo ekipa sy tamin'ny fotoana sasany, dia toy ny teo amin'ny tafika nasionalianina Ukrania avokoa ny ady. Fa maninona ny ekipa Ukranian? satria ny ankamaroan'ny Euro 2016 dia miankina amin'ny mpilalao avy amin'i Dynamo sy Shakhtar Donetsk. Ny tantara ratsy izay natomboka teo amin'ny mpilalao roa dia nandrahona ny hanakorontana ny firenena Euro 2016 ka mandra-samy hilamina ny filoham-pirenena eto ambany dia ny fametrahana ny fireneny ho loha laharana.
Andriy Yarmolenko sy Taras Stepanenko dia voatery nametraka ny fireneny ho loha laharana. Ny trosa BBC ary DailyMail
Ny isan'ny isan'ny hajany: Angamba ianao efa nahatsikaritra an'i Yarmolenko nandritra ny nijanonany tao Dortmund na Westham. Fa ny tsy fantatrao dia izao; angano ao amin'ny tanindrazany izy. Yarmolenko dia nifehy ny ligy baolina Okrainiana sy ny baolina kitra Okrainiana amin'ny ankapobeny nandritra ny taona maro izay voamarika tamin'ny fanomezam-boninahitra azy eto ambany.
Andriy Yarmolenko Untold Facts- Ny fanomezam-boninahitra azy maro. Ny trosa any Wikipedia
MIEZAHA HAHAY: Misaotra namaky ny tantaranay Andriy Yarmolenko zazakely ary Untold Biography Facts. amin'ny LifeBogger, Miezaka izahay mba hanana ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mety, dia zarao aminay ny fanehoan-kevitra eto ambany. Hanome voninahitra sy hanaja ny hevitrao foana izahay.